Apple waxay ka diiwaan galisaa Apple TV xafiiska shatiyada sida inay tahay qunsuliyad | Waxaan ka socdaa mac
Apple waxay ka diiwaangelisaa Apple TV xafiiska patentka sidii inay tahay qunsuliyad
Caadi ahaan markaan ka hadlayno shatiyada Apple waxaan fileynaa badeecooyin cusub ama badeecooyin suurtagal ah oo imaan doona mustaqbalka, sidoo kale waxay ku dhacdaa shatiyadan ama diiwaan gelinta oo kaliya u adeegta in lagu weydiisto lacag beddelkeeda kiiska qof doonaya inuu adeegsado. Markan waxa aan haysanno ayaa ah diiwaangelinta badeecad aan hore u ogaanay iyo waxa ay rabto waa in lagu daro liiska alaabada ka diiwaan gashan konsole ahaan.
Apple TV wuxuu hada leeyahay ciyaaro, laakiin dalabka diiwaangelinta caalamiga ah ee 028 waa midka loo isticmaalo qalabka wax lagu xiro waana kan si sax ah ay u rabto shirkadda Cupertino shirkadda Apple TV. Tani waa tallaabo xoogaa la yaab leh iyada oo la tixgelinayo nooca sheyga, laakiin ma noqon doonno kuwa dhaleeceeya diiwaankan Apple.
Patently Apple Waa had iyo jeer kan mas'uulka ka ah soo bandhigida shatigan iyo waxa ay shirkaddu damacsan tahay inay diiwaangeliso waa sanduuqa sare ee la dejiyey sida haddii ay tahay qunsuliyad. Isbedelada mustaqbalka dhow ee qalabkan? Waa hagaag, runta ayaa ah in suuqa qalabka lagu hayaa uu hadda aad u badan yahay, sidaa darteedumana muuqato in Apple ay hadda rabto inay "sanka gasho" samaynta konsoleer u gaar ah ama wax la mid ah.
Shaki la'aan, jiilka afraad iyo shanaad ee Apple TV wuxuu leeyahay codsiyo ciyaarta wuxuuna u oggolaanayaa dadka isticmaala iyaga inay ku raaxaystaan, laakiin ma ahan aalad si gaar ah loogu talagalay in lagu ciyaaro xitaa haddii ay leedahay xakamaynta wireless-ka ee SteelSeries oo ah qalab. Nimbus iyo awoodda iyo awoodda uu u leeyahay inuu ciyaaro 4k ka kooban si loo badbaadiyo, isagoo ka dhigaya taas oo u oggolaan lahayd in lagu daro qaar ka mid ah cinwaannada ciyaaraha xiisaha leh. Tani waxay asal ahaan ahaan laheyd waxa Apple gacanta ku heyn kara rikoorkaan, iyagoo bilaabaya taxane ah fiidiyoowyo fiidiyoow wanaagsan oo aan la mid aheyn kuwa ay hadda leeyihiin oo si toos ah dib loogu habeeyay codsiyada sanduuqa sare ee la dhigay. Waan arki doonaa waxa dhaca aakhirka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple TV » Apple waxay ka diiwaangelisaa Apple TV xafiiska patentka sidii inay tahay qunsuliyad
Apple AirPods waxay heli doontaa shahaado si looga hortago biyaha iyo shaqada "Hey Siri"
Isbarbar dhigaya Qalabyada 2.5 ayaa hadda lagu heli karaa astaamo cusub